Mampihomehy ivelany, mampalahelo anatiny… | NewsMada
Mampihomehy ivelany, mampalahelo anatiny…
Par Taratra sur 19/11/2016
Fitenin’ny tanora ankehitriny ny hoe : “ianao koa ohatra ny mampihomehy“. Raha ny marina, mahasosotra, na mahatezitra aza. Mba hisian’ny fitoniana izay hoe ohatra ny “mampihomehy” izay. Ambaran’ny mpandinika fa anisan’ny mahatonga ny hehy ny fakana tsy tsaroana ny toeran’ny olona mampihomehy, ka tsy hanao na tsy mahavita ny fiteniny sy ny fihetsiny ny tena, raha amin’izany.
Amin’izao fampiantranoana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia izao : tsindrindaona ny mpitondra, mikoropaka… Tonga vahiny ? Amboamboarina fa tsy tena amboarina ary ravahana voninkazo, ohatra, ny lalana hoe holalovan’ny vahiny, tsy avela handalo ny sarety sy ny posy, esorina ny mpatory an-tsena… Inona na ahoana koa? Atao izay hahatsara endrika ny tena, na afenina izay mahamenatra.
Tonga hatramin’ny tsaho etsy sy eroa : izao, hono; izatsy, hono. Aleo tsy lazaina, fa andrao manely ny resaka efa tsy marina. Fa ho takona amin’ny endri-javatra ivelany ankosotra ve ny fahantram-bahoaka ? Tsy fanalana ny mahantra talaky maso no inona, raha tena miseho ho zavatra ny mpitondra. Ahoana no hanalana ifotony ny vahoaka ao anatin’ny fahantrana lalina noho ny afitsoky ny mpitondra ?
Afenina mafy amin’ireo vahiny ny fahantran’ny vahoaka malagasy. Nefa fantatr’izy ireo fa manankarena i Madagasikara, fa ny vahoaka no mahantra; manankarena ny mpitondra matoa afa-mampiantrano fihaonana an-tampony iraisam-pirenena, fa ny vahoka no mahantra. Tsy ny afitsoky ny vahiny sasany sy ny mpitondra mpiray tsikombakombana aminy aza ve no anisan’ny mahatonga fahantrana ?
Ny vahiny koa aza no mahalala be lavitra noho ny mpitondra sy ny vahoaka ny harena eto Madagasikara ? Izay no mampisisika sy mampiady ireo firenen-dehibe roa na telo amin’izany… Tsy izay harena izay aza ve no mila afenina mba tsy horobain’ny hafa, fa tsy ny fahantrana: tsy takona afenina na ifanakonana aza. Mampihomehy ? Variana sy mivarina amin’ny endri-javatra ankosotra… Mampalahelo !
Tsy izay aseho ivelany tsinona no maha izy azy ny olona, fa izay afenina ao anatin’izany.